Puerto Rico - Fandotoana maloto | Fiaretana haran-dranomasina
Puerto Rico - fahalotoan'ny loto
Guánica Bay, zaridaina any Puerto Rico
Nandritra izay 40 taona lasa izay, ny sasana amin'ny haran-dranomasina lehibe indrindra ao Puerto Rico dia nahitana fiakaran'ny famaohana coral sy ny fihenan'ny fandrakofan'ny vatohara velona. Ny vatohara manodidina an'i Puerto Rico dia simba tanteraka, miaraka amin'ny fahasimbana ratsy indrindra hita eny amin'ny haran-dranomasina avy hatrany amoron-tsiraka avy amin'ny vahoaka be olona (Warne et al. 2005). Ny otrikaina sy ny otrikaretina mifandraika amin'ny rano maloto tsy voatsabo na tsy dia tsara fitsaboana dia mifandray amin'ny aretina na amin'ny haran-dranomasina na amin'ny olombelona.
Ny riandrano Rio Loco mikoriana ao amin'ny Helodrano Guánica dia 151 kilaometatra toradroa, iray amin'ireo lehibe indrindra ao Puerto Rico. Rehefa nivoatra ity faritra ity dia nitombo ny otrikaina sy ny antsanga nampitomboina 5-10 heny noho ny voajanahary (Ortiz-Zaya et al. 2005, Warne et al. 2005). Ao anatin'ny tetik'asa lehibe kokoa sy feno kokoa momba ny fanombanana ny rano sy ny fanarahan-dia ny fandotoana ny rano, ny fandotoana otrikaina ao amin'ny Guánica Bay dia tapa-kevitra fa avy amin'ny fako maloto amin'ny alàlan'ny toeram-pitsaboana rano maloto, fotodrafitrasa mivoaka ary indraindray tsy fahampian'ny rafi-pitsaboana maloto. Ireo fampidiran-tsakafo mahavelona ireo dia mampidi-doza ny tontolo iainana anaty rano ary koa ireo olona mampiasa sy mitsidika ny Bay. Manodidina ny dimy isan-jaton'ny mponina ao an-tanànan'i Guánica no mpanjono amin'ny fotoana feno, ary vondrom-piarahamonina kely kokoa ao amin'io faritra io, toa an-dry Papayo, Ensenada Honda ary La Parguera, dia vondron'olona mpanjono manan-danja.
Sarintanin'ny Helodrano Guánica manamorona ny morontsiraka atsimon'ny Puerto Rico sy ny rano manodidina an'i Rio Loco no mamantatra ireo toerana iharan'ny fahalotoan'ny rano maloto. Ny tondro dia misy ny amoniaka, detergents, E. Coli, Enterococcus ary Chlorophyll a. Sary © Ridge to Reefs and Protectores de Cuencas
Hotely amoron-dranomasina misy efitrano 27 misy efitra ao amin'ny Bay Guánica no fantatra fa loharanon'ny fandotoana maloto nandritra ny fanadihadiana ny fandotoana ny fandotoana izay tafiditra ao anatin'ny fampiharana ny Drafitrasa Rano Guánica. Ny rafi-panafody tsy mitongilana ao amin'ny Hotel dia mora tohina matetika rehefa tototry ny fampiasan'ny trano fidiovana sy fandroana. Ny faritra amoron-tsiraka akaikin'ny trano fandraisam-bahiny dia hita fa manana fatran'ny Chlorophyll a, amoniaka, mpamiratra optika ary bakteria mpanondro.
Volomparasy misy rano maloto ao amin'ny Helodrano Guánica ary mamelana algaly mifandraika amin'izany. Sary © Ridge to Reefs
Te hamaha ity olana ity ireo tompona trano fandraisam-bahiny ary niara-niasa tamin'ny Ridge to Reefs, nanapa-kevitra ny hanangana zaridaina afaka mandray rano maloto ary hampihena be ny habeny ary koa hanala na hanova ireo singa manimba toy ny pathogen, otrikaina ary akora simika. Ny Green Infrastructure dia mampiasa asa voajanahary voajanahary mba hanomezana fitsaboana fanampiny amin'ny famoahana ny tank septic, manatsara ny fanesorana ny loto ary mampihena be ny habetsaky ny rano maloto miditra ao amin'ny Bay. Ho an'ny Hotel Parador Guánica 1929, ny fivoahan'ny rano avy amin'ny rafitra septika dia nila nalaina ary nihena mba hampiroboroboana fitsaboana voajanahary fanampiny.
Hotel Parador Guánica 1929. Sary © Ridge to Reefs
Zaridaina orana vetiver miaraka amin'ny fanitsiana ny tany biochar dia nampiasaina hisamborana ny effluent ary hampitombo ny fanesorana otrikaina. Ity karazana rafitra ity dia nofidina hatramin'ny fakan-kazo malaky ny ahitra vetiver izay mandray haingana ny rano sy ny otrikaina, ary kosa ny mikraoba mikraoba mikraoba mahasoa izay manala ny otrikaina amin'ny rano maloto. Ny rano dia mamela ny ahitra miverimberina amin'ny alàlan'ny evapotranspiration, mipoitra amin'ny tany (mandeha amin'ny filtration fanampiny), na miditra amin'ny fantsona ambanin'ny tany mba hivoahana. Ny Ridge to Reefs dia nahomby tamin'ny fampiasana vahaolana hafa momba ny fotodrafitrasa maitso manomboka amin'ny fanomezana bioreactors ao amin'ny Chesapeake Bay ka hatrany amin'ny biofilters any Samoa Amerikanina, izay mampiasa bakteria sy akora voajanahary mba hitsaboana rano maloto. Tao amin'ny Hotely, zaridaina misy orana misy zavamaniry no nanome tombony tombony fanampiny, ary afaka atao modely fanabeazana ho an'ny mpitsidika hianatra momba ny vahaolana fotodrafitrasa maitso ho an'ny fitsaboana rano maloto.
Ny zaridaina misy orana dia nitovy habe amin'ny fampiasana ny tampon'ny rano tao amin'ny hotely hisorohana ny be loatra amin'ny ho avy. Tany maherin'ny 3 metatra no nofongarina sy namboarina tamin'ny fanitsiana biochar sy karbonika hafa. Napetraka ny fantsom-panafody ambanin'ny tany, ary nambolena teo amboniny ny ahitra mahery.
Ny tranonkala dia nanaraha-maso ny fahasalaman'ny zavamaniry, ny fatran'ny otrikaina ary ny fihazonana rano mandritra ny volana maromaro mandra-pahatongany mazava fa ny rafitra dia mitsabo tsara ny rano maloto, mifototra amin'ny fitomboan'ny zavamaniry sy ny santionan'ny otrikaina mahavariana. Ny santionany dia nalefa tany amin'ny Laboratoara Horn Point ao amin'ny University of Maryland ho an'ny famakafakana otrikaina ary nitentina 50% ny fanesorana ho an'ny azota sy ny phôlyôra. Raha ny tena izy, tamin'ny tranga fanandramana mahazatra sasany dia tsy nety nalaina ny santionany any ambany noho ny fitrandrahana ny rano miditra ao amin'ny fampiharana, manaporofo fa ity rafitra ity dia mandaitra amin'ny fanesorana ireo otrikaina ary koa ny fihenan'ny enta-mavesatra any anaty rano.
Taorian'ny haben'ny zaridainan'ny rano maloto ahafahana mandray ny tampon'ny volan'ny rano maloto, dia nihady lavaka ary nopetahany takelaka vita amin'ny fingotra, hahazoana antoka fa ho lava be ny fitsaboana azy io. Sary © Ridge to Reefs
Ny fanitsiana biochar dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fametrahana fangaro hazo maina sy zavamaniry maina ho any anaty hady ary andrehitra azy amin'ny afo. Sary © Ridge to Reefs
Raha vantany vao may ny fitaovan'ny zavamaniry ho lasa arina, fa alohan'ny hivadika lavenona dia maty ny afo. Ity fitaovana ity dia nampiasaina ho fanitsiana ny tany. Manaparitaka simika ny biolojika, ary manome velarana mora azo hanampiana bakteria azo ampitaina. Sary © Ridge to Reefs
Volana vitsivitsy taorian'ny fambolena dia namaka ny ahitra mahery ary niasa tsara ny rafitra mba hisorohana ny famoahana ireo lakandrano mandritra ny faran'ny herinandro. Ny ahitra lavitra indrindra avy amin'ny tanka septika dia nanomboka nalazo satria ny effluent dia nalain'ny ahitra akaiky kokoa ny loharano misy rano mahery.
Ity tetikasa ity dia mampiseho ny fampiharana ny fotodrafitrasa maitso sy ny rafitra voajanahary hanomezana fitsaboana fanampiny amin'ny rano maloto. Ity sy ny vahaolana mahomby amin'ny vidiny dia azo ampiharina amin'ny toe-javatra samihafa hanohanana paikady fitsaboana hafa.
Ny hady kely dia nofenoina potipotika vita amin'ny hazo sy biochar, izay samy manolotra fitsaboana amin'ny rano maloto. Ireo poti-kazo ireo dia rakotra fasika sy tany ary nambolena ahitra. Ny zana-ketsa ahitra dia tsy miteraka, mba hanafoanana ny mety hahatonga azy ho lasa manafika. Ny ahitra dia afaka mivelona amin'ny toe-javatra mafy, ary amin'ny alàlan'ny fakany sy ny evapotranspiration amin'ny raviny dia afaka mampiasa ny rano maloto rehetra ao amin'ny hotely. Sary © Ridge to Reefs
Mitohy ny asa ary ny fitazonana ny fandrosoana dia mitaky fandaminana mialoha ny fampandrosoana, ny faritra mando ary ny fotodrafitrasa rano maloto. Mila fitandremana sy fisoloana vava eo an-toerana ny fitantanana fahombiazan'ny rano ary efa matanjaka ao Guánica.
Ny fampiharana ny vahaolana voajanahary dia manatsara ny fomba fiasa sy ny fahombiazan'ny rafitra ary afaka mahazo fitsaboana avo lenta amin'ny vidiny ambany.
Tsy mandaitra ny fitadiavana vahaolana tonga lafatra amin'ny tsy fanaovana na inona na inona; ny fahasimban'ny tontolo iainana dia azo sorohana tsara kokoa noho ny fanamboarana.
Ny famakafakana kendrena sy ny fanarahana ny fandotoana dia mitarika fandraisana andraikitra mahomby sy fanatsarana, toy ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDrafitra fitantanana ny rano any Guánica Bay.
Ny fiheverana holistic ny riandrano no fomba mahomby indrindra hamantarana ny olana sy hamoronana vahaolana mifototra amin'ny natiora.
Ny fampitomboana ny fahaiza-manao eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo mpiara-miasa eo an-toerana sy ny fampiroboroboana ny fifampitokisana amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa dia mpandray anjara lehibe amin'ny fahombiazan'ny tetikasa.
Gardens Wastewater miorina amin'ny natiora (60,000 $)
Ezaka fanarahana ny fandotoana ny fandotoana ny morontsiraka sy ny rano velona ($ 25,000)
5 hekitara amin'ny faritra mando fitsaboana ao anatin'izany ny fandrindrana, ny famolavolana ary ny famelana ary ny fananganana (700,000 XNUMX $)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToetran'ny rano, voasarimakirana ary famoahana otrikaina mampiavaka ny ony any Puerto Rico, ary ny fiantraikany mety hitranga amin'ny haran-dranomasina
Mpanamboatra eo an-toerana miaraka amin'ny backhoe
Injeniera ao an-toerana izay nanome ny ahitra mahery
Ivon-toerana momba ny siansa momba ny tontolo iainana ao amin'ny University of Maryland, Laboratoara Horn Point
Protectores de Cuencas (faritra mando sy loto)
Ny National Fish and Wildlife Foundation dia nanome ny famatsiam-bola ho an'ny tetikasa amin'ny alàlan'ny famerenana / fanalefahana ny ahidrano ho an'ny programa fitobiana sambo sy solika.